सेयर लगानीकर्तालाई जिस्काउँदा गर्भनरको पद धरापमा ! – GALAXY
सेयर लगानीकर्तालाई जिस्काउँदा गर्भनरको पद धरापमा !
सेयर लगानीकर्ताहरुलाई जिस्काउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पद धरापमा परेको छ । अधिकारीकै कारण सेयर बजारमा पहिरो गएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले निर्णायक कदम चालेका छन् ।
शेयर लगानीकर्ताहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीनामा माग गरेका छन् । आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमताअनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठेरो बनाउँदै शेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरु रुष्ट बनेका छन् ।
यो व्यवस्थापछि लगातार शेयर बजार घटिरहेको छ । बजारमा निकै ठूलो नकरात्मक असर पार्ने निर्णय गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा पुँजी बजार सुधार संर्घष समिति नै गठन गरेको छ ।
यो समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने माग अघि सारेको छ । १६ बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा नै संघर्ष समितिले गभर्नरका कारण जनताको लगानी जोखिममा परेको बताएका छन् ।
नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल राष्ट्र बैंकले बजारलाई बवादीको दिशामा अघि बढाएको बताउँछिन् ।४० लाख लगानीकर्ताहरुको हितविपरीत गभर्नर अधिकारीले आफूखुसी नीति बनाएको भन्दै तत्कालै नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् ।